Chin United Football Club | Myanmar National League Football Club
Fixtures & Results MNL 2014
ချင်းယူနိုက်အသင်း နည်းပြချုပ် ဦးဋ္ဌေးမြင့်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း………….
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိ် လာတဲ့ချင်းယူနိုက်အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်တဲ့ ဦးဋ္ဌေးမြင့်နဲ့ အခုလိုသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးစကားအနည်းငယ်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q- မင်္ဂင်္လာပါ ဦး။ A- မင်္ဂင်္လာပါ ခင်ဗျာ။ Q- ဦး ချင်းယူနိုက်အသင်းမှာ စရောက်တဲ့ခုနှစ်ကို ပြော ပေးပါဦး။ A- ၂၀၁၄ ၊ ဇန်န၀ါရီလမှာ စရောက်ပါတယ်။ Q- အရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းနှင့်အခုချင်းယူနိုက်အသင်း ရဲ့ကွားခြားမှုလေးပြောပြပေးပါဦး။ A- ကျွန်တော် အရင်အသင်းတွေမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတုန်းက နိုင်ငံခြားကစားသမားခေါ်ယူခွင့်မရှိဘူးလေ။ပြည်တွင်းကမျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေနဲ့ဘဲ လုပ်ရတာ။အခုကျတော့ ပြည်တွင်းမျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေ ဆိုပေမယ့် Foreigner…
အသင်းပိုင်ရှင် Dr.James Lian Sai အား MRTV-4မှInterview
June (18)ရက်မနက်ပိုင်းတွင် CUFC အသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာဂျိမ်းလျန်ဆိုင်း၊ အသင်းမန်နေဂျာ ဦးဗန်ကုန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် CUFC လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့ သွားရောက်၍ကစားသမားများ၏ လေ့ကျင့်နေမှုများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အားပေးစကားများပြောခဲ့ပါသည်။MRTV-4သတင်းဌာနမှလည်ှးလာရောက်၍ အသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာဂျိမ်းလျန်ဆိုင်းအား Interview များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာဂျိမ်းလျန်ဆိုင်းက လက်ရှိအသင်းကိုအားရကျေနပ်မိကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် အဆင့်(၇) သို့(၈)ရရန် မျှော်မှန်းကြောင်း၊(၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် အဆင့်(၁)မှ (၃)အတွင်းရရှိရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်ပြီးလိုလေသေးမရှိအသင်းကို ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အသင်းပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဂျိမ်းလျန်ဆိုင်းက“ချင်းယူနိုက်အသင်းဟာတန်းဆင်းပြီးပြန်တက်တဲ့အသင်းဖြစ်ပေမယ့်လက်ရှိအခြေအနေကိုအားရကျေနပ်မိပါတယ်။လာမည့်နှစ်မှာပြည်တွင်းကစားသမားများကိုအပြောင်းအလဲလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူငယ်ကစားသမားအများဆုံးဟာ…
ထိုက်တန်သည့်ခြေစွမ်းဖြင့် မကွေးအသင်းအား (၃-၂) ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိ
2014 မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ ဒုတိယအကျော့ week ၁၂ ပွဲစဉ်ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှရတနာပုံ၊ဒုတိယနေရာမှမကွေးတို့ရှုံးပွဲကိုယ်စီကြုံတွေ့သွားခဲ့သည်။စနေပွဲစဉ်များကစားခဲ့ရာတွင် နေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန်တို့လည်း ကိုယ်စီရှုံးပွဲကြုံခဲံသောကြာင့် week-12 သည် အမှတ်ပေးဇယား (၄)သင်းစလုံးအတွက် ကံမကောင်းသောသီတင်းပတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ချင်းယူနိုက်တက်နှင့်မကွေးအက်ဖ်စီတို့ပွဲစဉ်တွင် CUFC အသင်း၌ရာသီဝက်အပြောင်းအရွှေ့ကာလက ဇွဲကပင်အသင်းမှခေါ်ယူထားသည့်ညီညီမင်းနှင့် ပြည်ပကစားသမားသစ် လိုင်ဘေးရီးယားတိုက်စစ်မှူးဟာမွန်တို့ကိုအဓိကကစားသမားများဖြစ်ကြသည့် Keith ၊ Yagin ၊Sunny၊အောင်မျိုးသန့်၊ ရန်လျန်ကျဲ၊ ဝေဖြိုး၊ဆန်းအာ၊ ရဝေဇင်(ဂိုး)၊အောင်သူစိုးတို့နှင့် ပွဲထွက်ကစားစေခဲ့သည်။ ပွဲအစမိနစ်အတော်ကြာသည်အထိ မကွေးအသင်းမှာ CUFC ကစားကွက်အောက်ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးပထမပိုင်းမှာပင် ဦးဆောင်ဂိုး(၂)ဂိုးပေးလိုက်ရသည်။CUFC အသင်း၏ ကိတ်မာတူန…
ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းတွင် Liberia မှကစားသမားနှင့် June (5)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ Bottom of Form ပထမအကျော့ပွဲစဉ်အပြီးတွင် ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းမှာ အမှတ်စဉ်ဇယား(၁၀)တွင်ရောက်ရှိနေသော်လည်း လာမည့်ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်များတွင် တန်းတက်နိုင်ရန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်ပွဲစဉ်များတွင် ပြည်ပမှကစားသမားအသစ်လည်းပါဝင်ကစားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ဆက်လက်၍ ပြည်တွင်းမှ ကွင်းလယ်ဖြတ်ကစားသမားတစ်ဦးလည်းထပ်မံခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်လျှက်ရှိနေပါသည်။
အသင်း၏ခြေစွမ်းကို အားရကျေနပ်ဟုDr.James ဆို
လက်ရှိချင်းယူနိုက်တက်အသင်း၏အသင်းလိုက်စုစည်းမှုနှင့် ခြေစွမ်းကို အားရကျေနပ်မိကြောင်း၊လာမည့်ဒုတိယအကျော့တွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခြေစွမ်းကို ပြသနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါက်တာဂျိမ်းလျန်ဆိုင်းက ဆိုခဲ့သည်။ချင်းယူနိုက်အသင်းမှာ ယခုနှစ်တွင်မှ တန်းတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း နေရှင်နယ်လိဂ်-၁နှင့်ထိုက်တန်သောခြေစွမ်းတစ်ခုကိုပအကျော့ပွဲစဉ်များတွင်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ “ပထမအကျော့မှာကစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်အသင်းရဲ့စုစည်းမှုနဲ့ခြေစွမ်းကိုအားရကျေနပ်မိပါတယ်။လာမည့်ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွင်မှာလည်းခြေစွမ်းဆက်လက်ပြသနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။”ဟုဆိုသည်။
လာမည့် MNL အတွက်ချင်းလူမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းများထဲမှ စပွန်ဆာရှာမည်
Chin United FC Nih Chinmi Sinah Sponsor A Hal Lai CUFC : Chinmi nih kan ngeihmi Chin United FC (CUFC) cu “Myanmar…	Full Article →
MNL-2ဘောလုံးရာသီပြီးဆုံးချိန်ကတည်းက ရပ်နားထားသောချင်းယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီအသင်း၏ လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များကို သတ်မှတ်ရက်ထက်စောစီးစွာ ပြန်လည်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။မူလကအသင်း၏ကစားသမားများကို ခွင့်ရက်(၂)လအထိပေးထားခဲ့သော်လည်း MFF Cup ပြိုင်ပွဲကစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် လေ့ကျင့်မှုများကိုစတင်ပြုလုပ်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။အသင်း၏လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွင်…	Full Article →
Chin United Football Club MNL Cup 2013 Fixture Group (D)…	Full Article →
စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုရန် ပြည်ပကစားသမားများဘက်မှ အသင်းကိုကမ်းလှမ်းထားကြောင်း
MNL-2တွင် ဗိုလ်ဆွဲခဲ့စသ်က ပါဝင်ကစားခဲ့သော ပြည်ပကစားသမားများဘက်မှ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားသည်။ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ MNL-2 ဘောလုံးရာသီက ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းတွင်…	Full Article →
MNL-2 ၏နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အပြီး ချင်းယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ၏ ရပ်တည်မှု
စဉ် အသင်း ပွဲ နိုင် သရေ ရှုံး ရဂိုး ပေးဂိုး ဂိုးကွာ ရမှတ် ၁။ ချင်း ၁၆ ၁၀ ၄ ၂ ၃၃ ၁၀ ၂၃ ၃၄ ၂။ GFA…	Full Article →
ချင်းယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီအသင်း MNL-2တွင် ပထမနေရာရရှိခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုဖလားအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ပေးခဲ့သော ကစားသမားများ
အမည် ကျောနံပါတ် ဂိုးအရေအတွက် Keith Martu Nah 23 18 ဇင်မျိုးအောင် 11 …	Full Article →
Hakha Trip 2013
ချင်းယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီလေ့ကျင့်မှုများ	Full Article →
အသင်းပရိသတ်များ	Full Article →
Chin United group ဓါတ်ပုံများ
Chin United group ဓါတ်ပုံများ	Full Article →
Chin United FC 2012 Video
Chin United FC 2012 Video	Full Article →
Latest	ချင်းယူနိုက်အသင်း နည်းပြချုပ် ဦးဋ္ဌေးမြင့်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း………….
Our Mission	Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Myanmar National League Last MatchChin United – Ayeyawady United0 - 0Table
© 2015 Chin United Football Club
developed by Innovextree Technology